Ny ankamaroan'ny asa fitahirizana rahona dia manova ny angon-drakitra voatahiry ao amin'ny servers afa-tsy ny singa vitsivitsy tahaka ny Amazon Drive. raha nahavita encryption Ny fanodinkodinan'ireo fandrahonana mifandraika amin'ny tsiambaratelo an-tserasera, ny fahafahan'ireo raharaham-pitahirizana rahona amin'ny fitantanana ny fanalahidy fanalahidy dia mampiadana kokoa ny rakitra ampiasain'ny mpampiasa. Mazava ho azy, ny servisy fitahirizana rahona toy ny Microsoft One Drive dia tsy hanararaotra ity fahabangozana ity amin'ny tombony ara-bola, fa ny mpampiasa dia tsy afaka manadino ny zava-misy fa ny votoatiny rehetra dia nodinihina ho fitaovana voadona na olana hafa toy izany.
Ankoatra izany, misy ny fandrahonana ny fandikan-dalàna na ny Ny fikasan'ny phishing dia hahomby na dia eo aza ny serivisy fitehirizam-bokatra amin'ny alàlan'ny fampiasana foibe momba ny serivisy. Ireo olana ireo dia nahatonga ny fampiroboroboana rindrambaiko fitehirizan-tsompitra zero tsy fahalalana izay mamela ny mpampiasa hanapa-kevitra tsy misy fanavakavahana hafa. Noho izany, ny mpanjifany dia afaka mandefa ny angon-drakitra mialohan'ny handao ny fitaovany ary tsy ho voafafa mandra-pamoakany azy avy amin'ny rahona.
Ankoatra izany, ny famaha fanapahana dia mitoetra amin'ny mpampiasa. Midika izany fa tsy mahazo miditra amin'ny antontan-taratasin-tseranana ny mpandraharaha rahona na dia nangatahin'ny manampahefana aza. Maro ireo fitaovana fanalahidy novoina no novolavolaina ary tonga miditra amin'ny alim-pitarafana ny rahona mba hanomezana izany fiarovana fanampiny izany. Ny Cryptomator dia fitaovana iray izay ahafahan'ny mpampiasa mandefa ny rakitra lehibe ao anaty fiara virtoaly alohan'ny hametrahana azy ao anaty rahona.
Ny rindrankajy dia manome fomba tsotra hampiroboroboana rakitra voatahiry ao anaty rahona. Manolotra fiara virtoaly iray izy io izay maka ny sarimihetsika henjana eo amin'ny solosaina satria afaka manampy, manitsy ary manala ireo rakitra.
Ny Cryptomator dia tsy mamela ny famaritana ny rakitra, fa ny tranok'asa sy ny anaran'ny rakitra ihany no miverimberina; ny rakitra miafina ao amin'ny virtoaly virtoaly dia alefa any amin'ny servisy fitahirizana rahona.
Ny rindrambaiko dia mandeha ao amin'ny solosaina fotsiny ihany ary tsy mitaky fitaovana fanampiny mifehy azy amin'ny olon-kafa.
Ankoatr'izay ihany, ny mpampiasa ihany no afaka miditra amin'ny fampahalalam-baovao Cryptomator raha tsy misy olona afaka mivantana amin'ny solosainy. Ny Cryptomator dia misy amin'ny fitaovana mihazakazaka amin'ny Android, Windows, Macintosh, Linux ary Apple iOS (iPod, iPhone, iPad) ary dia rindrambaiko maimaim-poana. Ny fampiharana mampiasa ny rafitra fandefasana Android sy iOS dia voampanga hampiasa ny rindrambaiko, fa ireo mpampiasa Windows, Linux ary Macintosh dia afaka mahazo izany maimaim-poana.
Dingana ho an'ny fampivoarana iray mitondra fiara mampiasa Cryptomator
Dingana 1: Famoronana ny Vaomiera Voalohany:
Afaho ny Cryptomator avy amin'ny tranonkala ary apetraho izany
Mamoròna vaova vaovao amin'ny fipihana ny bokotra + ary misafidiana 'Create New Vault'
Dingana 2: Fidio ny toerana
Lazao ny tranobongo ary fidio ny toerana fitahirizana izay ho ao anatin'ny ordinateranao One Drive
Dingana 3: Fidio ny tenimiafina iray
Mamoròna tenimiafina azo antoka ho an'ny vatam-bidy ary hanamafy. Ireo barika miloko dia maneho ny tanjaky ny tenimiafina.
Accessibility to the Vault:
Vantany vao noforonina ny vaavo dia azonao atao ny mahazo azy:
Ampidiro ny tenimiafina ary tsindrio ny 'Unlock Vault'
Ny varavarankinan'ny Finder na Explorer dia misokatra amin'ny viriosy virtoaly izay ahafahanao manangona rakitra
Tadiavo ary atsipy ireo rakitra ao anaty fiara virtoaly. Amin'izany fomba izany, ny rakitra dia afindrafatra sy tahirin-kevitra ao amin'ny vaobe. Raha toa ka tahirizina mivantana mivantana any amin'ny toerana fitahirizana ny efitranon'ireo rakitra, dia tsy ho voahodina izy ireo.
Rehefa voarakitra ao anaty vata ny tahiry mahatsikaiky rehetra ary tsy ampiasaina dia afatory ny tranobe Cryptomator ary afindrano ny varavarankely. Ny rindran-damba virtoaly dia alaina avy eo, ary ny varavaran-javatra Finder na Explorer dia mihitsoka.
Fix: Nisy olana teo amin'ny famandrihana solosaina diso sasany tao amin'ny fitaovana fananganana Media
Sync Desktop, Documents and Pictures Ordinatera amin'ny OneDrive
Ity no antony mahatonga ny fangatahana BitLocker ho mora kokoa amin'ny Windows 10 noho ny Windows 7
Ahoana ny fizarana rakitra havanana amin'ny Windows 10
Ahoana ny fampiasana ny Dashboard Privacy Database vaovao Microsoft
Amboary ny fiara eo anelanelan'ny MBR sy GPT ao amin'ny Windows 10 tsy misy Data Loss
Ahoana ny fomba hikaroka ny PC Windows manontolo amin'ny rakitra iray manontolo
Tags:Computer file Security rafitra tahirin-kevitra Directory (informatika) encryption Hard disk drive
Unité centrale bilaogy Performance Linux Ubuntu Systems HTML afa-po Malagasy Bible Ubuntu 16 Phone command line Plugins Command GNOME Android famotsorana CentOS HTTPS tahirin-kevitra fitaovana "PC MySQL Cortana Samsung Galaxy One ' WordPress haino aman-jery sosialy toe-tsaina Linux rafitra ubuntu 15.04 CentOS 7 OS X vaovao farany Firefox takelaka fikirakirana Google Screen Fitaovana finday nbsp Database Video famerenana iPhone API Facebook Windows 10 Ubuntu hametraka PDG Bing windows update Apache Apps rindrambaiko PHP fitaovana finday File Windows Phone loharano misokatra Server lalao Windows 8 Unix Company Ubuntu 14.10 endri-javatra finday avo lenta raki-daza Debian 10 fitaovana Users IP adiresy USB web server paoma Up " Time Twitter Plugin Microsoft Windows 04 ram Ubuntu 14.04 YouTube Chrome fifamoivoizana Apple Watch Linux Mint taona SEO SSH Support Microsoft app store PPA Samsung SSD Nginx HTTP web browser Windows fikarohana Toetoetra Rafitra fikirakirana lalao 'App fanamarinana MAMAKA bilaogy fitaovana